Garabkii Xisbiga Kulmiye ee Muuse Biixi oo Golaha Guurtida ka aqbalay inay hakiyaan shirkii golaha dhexe ee xisbiga oo u mudeysnaa inuu qabsoomo beri sabtida | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Hargeisa 30/05/2014 (SDWO.CO) Garabkii Xisbiga Kulmiye ee Muuse Biixe ayaa soo saaray warsaxaafadeed ay ku sheegayaan inay hakiyeen shirweynahii golaha dhexe ee xisbiga oo beri qabsoomi lahaa iyagoo ka jawaabaya codsigii uga yimid gudidii golaha guurtida ee isku deyeysay inay qaboojiyaan murankan kulul ee ka dhex qarxay madaxweyne Silanyo iyo Muuse Biixi. Dadka ayaa wadnaha farta ku wadahayey inuu isku dhac balaandhani ka imanlahaa hadii uu qabsoomilahaa shirkaas inuu beri sabtida 31ka May dhicilahaa.
Warsxaafadeedkaas oo uu ku saxeexanayahay Siciid Cilmi Rooble ayaa u qornaa sidan
Ujeedo : jawaaab celin baaqii guddida golaha guurtida ee dhexdhexaadinta khilaafka xisbiga kulmiye Anagoo ka jawaabayna baaqii gudida dhexdhexaadinta ee golaha guurtida waxaanu halkan ku cadaynaynaa inaanu aqbalnay baaqaa isla markaana aanu hakinay shirkii golaha dhexe ee qabsoomayey 31/5/2014 maalinta sabtida .
Waxaanu ka xunahay dhacdadii iyo qaabkii xalayto saqdii dhexe loo weeraray wasiir ku xigeenkii hore ee amniga c/laahi abokor.
Waxaa kaloonu ka xunahay hadalkii ka soo yeedhay wasiirka wasaarada arimaha gudaha ee qaraxyadii dhacay ku tilmaamay in kulmiye ka danbeeyey , waxaanu marwalba dhiiri galinaynaa amniga iyo xasiloonida dalka waxaanu leenahay cid alla cidii ka danbaysayna way iska soo bixi doontaa .
Waxaanu shacbiga Somaliland ugu baaqaynaa inay ilaashadaan nabadooda ,wada jirkooda iyo xasiloonidooda .
Xildhibaan : Siciid Cilmi Rooble